2 Ihe E Mere 24 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Abụọ 24:1-27
Ọchịchị Jehoash (1-3)
Jehoash rụziri ụlọ nsọ Chineke (4-14)
Jehoash malitere ife arụsị (15-22)
Ndị na-ejere Jehoash ozi gara gbuo ya (23-27)
24 Jehoash dị afọ asaa mgbe ọ malitere ịchị.+ Ọ chịrị afọ iri anọ na Jeruselem. Aha nne ya bụ Zibia onye Bia-shiba.+ 2 Jehoash nọ na-eme ihe ziri ezi n’anya Jehova n’oge niile Jehoyada onye nchụàjà dị ndụ.+ 3 Jehoyada lụtaara ya ụmụ nwaanyị abụọ, ha amụtara ya ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị. 4 Ka oge na-aga, ọ bịara gụwa Jehoash agụụ ịrụzi ụlọ Jehova.+ 5 N’ihi ya, ọ kpọkọtara ndị nchụàjà na ndị Livaị, sị ha: “Gaanụ n’obodo ndị dị na Juda nata ndị Izrel niile ego a ga-eji na-arụzi ụlọ Chineke unu+ n’afọ ọ bụla. Gaanụ ngwa ngwa.” Ma ndị Livaị agaghị ngwa ngwa.+ 6 Eze kpọziri Jehoyada, bụ́ onyeisi ha, sị ya:+ “Gịnị mere na ị gwabeghị ndị Livaị ka ha gaa nata ndị Juda na ndị bi na Jeruselem ụtụ dị nsọ otú Mosis ohu Jehova kwuru ka a na-eme?+ Ụtụ a bụ ụtụ ndị Izrel na-atụ maka ụlọikwuu dị nsọ.+ 7 Ị manụ na ụmụ Atalaya,+ bụ́ ajọ nwaanyị, banyere n’ụlọ ezi Chineke n’ike,+ bukọrọ ihe niile dị nsọ dị n’ụlọ Jehova ma jiri ha na-efe Bel.” 8 N’ihi ya, a rụrụ otu igbe,+ dọsa ya ná mpụga ọnụ ụzọ ámá ụlọ Jehova otú eze kwuru ka e mee.+ 9 A gwakwara ndị Juda niile na ndị niile bi na Jeruselem ka ha tụọrọ Jehova ụtụ dị nsọ,+ otú Mosis ohu ezi Chineke gwara ndị Izrel n’ala ịkpa ka ha na-eme. 10 Ndị isi niile nakwa mmadụ niile wee ṅụrịa ọṅụ.+ Ha nọkwa na-atụnye ụtụ n’igbe ahụ ruo mgbe o juru.* 11 Ọ na-abụ ndị Livaị hụ na ego dị n’igbe ahụ ehiela nne, ha ebugara ya eze ka e wepụta ego dị n’ime ya. Odeakwụkwọ eze na onye na-enyere onyeisi nchụàjà aka na-abịazi wepụta ego dị n’igbe ahụ,+ bughachikwa ya ebe ọ na-adị. Otú a ka ha na-eme kwa ụbọchị. Ha na-enwetakwa nnukwu ego. 12 Eze na Jehoyada na-ewerezi ya nye ndị na-elekọta ọrụ a na-arụ n’ụlọ Jehova. Ndị ahụ agazie goo ndị na-awa nkume na ndị omenkà ka ha bịa rụzie ụlọ Jehova.+ Ha na-egokwa ndị na-eji ígwè na ọla kọpa arụ ọrụ ka ha bịa rụzie ihe ndị mebiri n’ụlọ Jehova. 13 Ndị ahụ na-elekọta ọrụ hụrụ na a malitere ọrụ ahụ. Ha nọkwa na-elekọta ọrụ ahụ ka a nọ na-arụzi ụlọ ahụ. Ha rụzikwara ụlọ ezi Chineke, ya esie ike, dịkwa otú o kwesịrị ịdị. 14 Ozugbo ha rụchara, ha wetaara eze na Jehoyada ego fọrọnụ, ha ejiri ya rụọ arịa ndị ga-adị n’ụlọ Jehova. Ha rụrụ arịa ndị a ga-eji na-eje ozi nakwa ndị a ga-eji na-achụ àjà. Ha rụkwara iko dị iche iche, jirikwa ọlaedo na ọlaọcha rụọ arịa dị iche iche.+ N’oge niile Jehoyada dị ndụ, ha na-anọ n’ụlọ Jehova mgbe niile achụ àjà a na-esu ọkụ.+ 15 Jehoyada mere agadi, afọ ole ọ dịrị ndụ jukwara ya afọ. Ọ nwụrụ mgbe ọ dị otu narị afọ na iri atọ (130). 16 Ha liri ya n’Obodo Devid n’ebe a na-eli ndị eze,+ n’ihi na o mere ihe ọma n’Izrel+ n’ihe gbasara ezi Chineke na ụlọ nsọ ya. 17 Mgbe Jehoyada nwụchara, ndị isi ndị Juda batara kpọọrọ eze isiala. Eze gekwara ha ntị, mee ihe ha gwara ya. 18 Ha hapụrụ ụlọ Jehova bụ́ Chineke ndị nna nna ha, malite ife arụsị na ogwe osisi arụsị.* Mmehie a ndị Juda na ndị Jeruselem mere mere ka Chineke wesa ha iwe. 19 Jehova nọkwa na-ezigara ha ndị amụma iji mee ka ha lọghachikwute ya. Ndị amụma ahụ nọkwa na-adụ ha ọdụ, ma ha egeghị ha ntị.+ 20 Mmụọ Chineke wee dakwasị Zekaraya nwa Jehoyada+ onye nchụàjà, ya eguzoro n’ihu ndị obodo ha, sị ha: “Ezi Chineke kwuru, sị, ‘Gịnị mere unu ji na-emebi iwu Jehova? Ihe agaghị agaziri unu. Ebe ọ bụ na unu ahapụla Jehova, ọ ga-ahapụkwa unu.’”+ 21 Ma, ha gbaara ya izu,+ eze agwa ha ka ha jiri nkume tụgbuo ya, ha atụgbuo ya n’ogige ụlọ Jehova.+ 22 Eze Jehoash echetaghị otú Jehoyada si gosi na ọ hụrụ ya n’anya, ya egbuo Zekaraya nwa ya. Mgbe Zekaraya nọ n’ọnụ ọnwụ, ọ sịrị: “Ka Jehova kwụọ gị ụgwọ ihe a i mere.”+ 23 Ná mmalite afọ na-esonụ, ndị agha Siria lụsoro Jehoash agha, banyekwa na Juda na Jeruselem n’ike.+ Ha gburu ndị isi niile+ nọ na Juda, zigakwara eze Damaskọs ihe niile ha kwatara n’agha ahụ. 24 N’agbanyeghị na ndị agha Siria ndị lụsoro ha agha ehighị nne, Jehova nyefere imirikitiimi ndị agha+ Juda n’aka ha, n’ihi na ha hapụrụ Jehova bụ́ Chineke ndị nna nna ha. Otú a ka ha* si kwụọ Jehoash ụgwọ ihe o mere. 25 Mgbe ha hapụrụ ya lawa (n’ihi na ha merụrụ ya ezigbote ahụ́ hapụ ya*), ndị na-ejere ya ozi gbaara ya izu maka na o gburu ụmụ* Jehoyada+ onye nchụàjà. Ha gburu ya ka o dina n’àkwà* ya.+ Ha likwara ya n’Obodo Devid,+ ma ha elighị ya ebe a na-eli ndị eze.+ 26 Ndị gbaara ya izu ahụ bụ:+ Zebad nwa Shimiat bụ́ nwaanyị Amọn na Jehozabad nwa Shimrit bụ́ nwaanyị Moab. 27 Ihe ndị gbasara ụmụ Jehoash, na ọtụtụ ihe ọjọọ ndị e kwuru na o mere,+ nakwa otú o si rụzie ụlọ ezi Chineke,+ e dere ha n’akwụkwọ e dere gbasara ndị eze. Amazaya nwa ya nọchiri ya, malite ịchị.
^ O nwere ike ịbụ, “ruo mgbe ha niile tụnyere ụtụ n’ime ya.”
^ Ya bụ, ndị agha Siria.
^ Ma ọ bụ “n’ihi na ọ rịawara ezigbo ọrịa ha ahapụ ya.”
^ Ma ọ bụ “nwa.” O nwere ike ịbụ na ihe mere e ji dee na ọ bụ ụmụ bụ iji kwanyere ya ùgwù ruuru ya.
2 Ihe E Mere 24